प्लस टु पास विद्यार्थीका मापदण्ड तयार, कस्तो ग्रेड ल्याएकाले कुन संकायमा भर्ना गर्न पाउने ? – Everest Dainik – News from Nepal
प्लस टु पास विद्यार्थीका मापदण्ड तयार, कस्तो ग्रेड ल्याएकाले कुन संकायमा भर्ना गर्न पाउने ?
काठमाडौं, साउन २१ । पहिलोपटक कक्षा १२ को नतिजा लेटर ग्रेडिङमा सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयले भर्नाको मापदण्ड तयार गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न संकाय र संस्थानले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गरेका छन् ।
अधिकांश संकायले साधारण विषयमा डी प्लस र प्राविधिक विषयमा सी र सी प्लस ग्रेड ल्याएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेका छन् । एउटै संकायमा पनि विषयअनुसार आवश्यक न्यूनतम ग्रेड फरक छ । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा साधारण र प्राविधिक विषयमा फरक मापदण्ड निर्धारण भएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मानविकी संकायका डिन प्रा. शिवलाल भुसालका अनुसार बिसिएमा भर्ना पाउन सबै विषयमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड चाहिने मापदण्ड तय गरिएको छ । स्नातक तहमा पढाइ हुने मानविकीका ४० विषयमध्ये बिसिएबाहेक सबै विषयका लागि ‘डी प्लस’ ल्याएको हुनुपर्नेछ । कक्षा ११ र १२ मा जुनसुकै विषय पढेका विद्यार्थीले पनि मानविकी संकायमा स्नातक तहमा भर्ना पाउने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापन संकाय बिबिएसलाई डी प्लस अरू सबैमा न्यूनतम सी
साइन्सः बिएससीमा न्यूनतम सी र अन्यमा सी प्लस
शिक्षा संकायः डी प्लस ल्याउने सबैलाई अवसर
इन्जिनियरिङः न्यूनतम सी ग्रेड